NA KỌMPUTA NA-EFU MFC120U.DLL - DLL - 2019
Ikwusi okuku na mfc120u.dll
Njehie nke ụlọ akwụkwọ dị omimi, lee, abụghị ihe a na-amaghị ama ọbụna na nsụgharị ọhụrụ nke Windows. Ụfọdụ n'ime ihe ndị na-emekarị bụ nsogbu na components Microsoft components C ++, dịka ọbá akwụkwọ mfc120u.dll. Ọtụtụ mgbe, ọdịda dị otú ahụ na-apụta mgbe ị malitere nchịkọta akụkọ Corel Draw x8 na nsụgharị ọhụrụ nke Windows, malite na "asaa".
Ụzọ nke idozi nsogbu na mfc120u.dll
Dịka ọtụtụ njehie DLL ndị ọzọ metụtara ụlọ ọrụ Microsoft Visual C ++, a na-edozi nsogbu na mfc120u.dll site n'ịwụnye nkesa ọhụrụ nke nkesa kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ụfọdụ na usoro a abaghị uru maka gị, ịnwere ike ibudata ma wụnye DLL na-efu ma ọ bụ iji aka.
Ihe omume DLL-Files.com Onye ahịa bụ otu n'ime ndị enyi na-emekarị omume, iji dozie ọtụtụ nsogbu na ụlọ akwụkwọ. Ọ ga-enyere aka imeri ọdịda na mfc120u.dll.
Meghee usoro ihe omume. Chọta ebe nchọta ahụ na windo ahụ. Pịnye na aha faịlụ ị na-achọ. mfc120u.dll wee pịa "Gbaa nyocha faịlụ dll".
Mgbe ngwa ahụ gosipụtara nsonaazụ, pịa aha faịlụ ahụ achọtara.
Lelee ihe ndekọ ụlọ akwụkwọ, wee pịa "Wụnye" ịmalite ibudata na ntinye nke mfc120u.dll na usoro.
Na njedebe nke usoro a, anyị na-akwado ịmalitegharịa kọmputa gị. Mgbe ị na-ejikwa usoro ahụ, njehie agaghịzi eme.
Usoro 2: Wụnye Microsoft Visual C ++ ngwugwu
Ụlọ akwụkwọ dị omimi gụnyere na nkesa a, dịka iwu, arụnyere na usoro ma ọ bụ ngwa ndị ha chọrọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke a anaghị eme, ma a ghaghị ibudata ngwugwu ahụ ma tinye ya n'enweghị otu.
Download Microsoft anya C ++
Gbaa nhazi ahụ. Na-agụ ma nabata nkwekọrịta ikike maka nkwụnye.
Iji malite usoro nwụnye ịkwesiri ịpị "Wụnye".
Chere ihe dị ka minit 2-3 ruo mgbe ebudatara faịlụ ndị dị mkpa ma kesaa nkesa na kọmputa.
Mgbe ịchisịrị usoro nwụnye, mechie window site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị ma malitegharịa PC ahụ.
Ọ bụrụ na n'oge echichi enweghi ọdịda, i nwere ike ijide n'aka na ị kwụsịrị nsogbu ahụ na mfc120u.dll.
Nzọụkwụ 3: Ntinye akwụkwọ nke faịlụ mfc120u.dll
Maka ndị ọrụ na-enweghị ike ịnweta ụzọ 1 na 2, anyị nwere ike ịnye ngwọta ọzọ maka nsogbu ahụ. Ọ na-ejikọta DLL na-efu na diski ike ma na-ebugharị faịlụ ahụ ebudatara na ndekọ ahụC: Windows System32.
Biko mara - ọ bụrụ na ị na-eji usoro x64 nke os sitere na Microsoft, adreesị ahụ ga-adịworịC: Windows SysWOW64. Enwere ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ na-enweghị ihe doro anya, yabụ tupu ịmalite ịmepụta usoro niile ị kwesịrị ị mara onwe gị na nduzi nchịkọta maka ụlọ akwụkwọ dị ike.
O yikarịrị ka ọ ga-adị mkpa ka ị rụọ ọrụ ọzọ - DLL ndebanye. Omume a dị mkpa iji mata akụkụ ahụ - ma ọ bụrụ na OS agaghị enwe ike iji ya rụọ ọrụ. Enwere ike ịchọta ntụziaka zuru ezu n'isiokwu a.